आयो यस्तो स्मार्ट फोन, एकपल्ट चार्ज गर्दा १४ दिन ढुक्क ! « pennepal.com
आयो यस्तो स्मार्ट फोन, एकपल्ट चार्ज गर्दा १४ दिन ढुक्क !
Published On :3June, 2022 10:24 pm By :
एजेन्सी । बजारमा एक पछि अर्को अत्याधुनिक स्मार्टफोन आएसँगै ब्याट्रीको चार्ज नटिक्ने समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।
ध्एज्ञढ स्मार्टफोन वाटरप्रुफ रहेको छ । यसमा ६।७८ इन्चको डिस्प्ले राखिएको छ जसमा फुल एचडी प्लस रिजोलुसन तथा ९० हर्ज रिफ्रेस रेट रहेको छ । यसमा मिडियाटेक हिलियो न्ढछ प्रोसेसर राखिएको छ । फोनमा ८ जिबीको र्याम र २५६जिबीको इन्टरनल स्टोरेज दिइएको छ ।